Manomboka amin'ny fanday ka hatramin'ny lolo - Church of God of Switzerland Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-02 > Manomboka eo amin'ny lalitra ka hatramin'ny lolo
Voasamboara ny tanimbola kely iray. Nisandratra ho ambony izy satria te-hahatakatra ny ravina lehibe kokoa noho izy ireo matsiro kokoa. Avy eo izy dia mahita lolo iray mipetraka eo amin'ny voninkazo iray izay azon'ny rivotra atelin'ny rivotra. Tsara tarehy sy maro loko izy. Miambina azy manidina avy amin'ny voninkazo hatrany amin'ny voninkazo izy. Saro-piaro ny niantsoantso azy izy: «Tsara vintana ianao, manidina avy amin'ny voninkazo mankamin'ny voninkazo, mamirapiratra miloko mahafinaritra ary afaka manidina mankany amin'ny masoandro raha mila miady eto aho, miaraka amin'ny tongotro maro ary afaka miditra fotsiny amin'ny tany. Tsy afaka mankany amin'ny voninkazo mahafinaritra aho, ny ravina mahafinaritra sy ny fitafiako dia tsy misy loko marevaka, ahoana ny maha-tsy rariny ny fiainana! »
Mahatsapa alahelo kely ny lolo ny mofomamy ary mampionona azy: «Afaka mitovitovy amiko ianao, angamba miaraka amina loko mahafinaritra kokoa. Dia tsy mila miady intsony ianao ». Ny bibikely dia manontany hoe: "Ahoana no nanaovanao izany, inona no nitranga nanova anao be?" Namaly ny lolo hoe: «Zavamaniry toa anao aho. Indray andro dia nahare feo nilaza tamiko aho hoe: Tonga izao ny fotoana hanovako anao. Manaraha ahy dia hitondrako anao amin'ny androm-piainana vaovao, hikarakara ny sakafonao ianao ary ny diako miandalana no hanovako anao. Matokia ahy ary aharitra, dia ho lasa olom-baovao ianao amin'ny farany. Ny haizina izay ataonao ankehitriny dia hitarika anao amin'ny mazava sy hanidina eo amin'ny masoandro ».
Ity tantara kely ity dia fampitahana mahafinaritra izay mampiseho antsika ny drafitr'Andriamanitra ho antsika olombelona. Mitovitovy ny fiainantsika ny bibikely alohan'ny ahafahantsika mahalala an'Andriamanitra. Fotoana hanombohan'Andriamanitra miasa ao amintsika, hanovana antsika miandalana mandrapahatonga amin'ny alàlan'ny kiririoka sy ny metamorphose amin'ny lolo. Fotoana mamelona antsika ara-panahy sy ara-batana ary mamorona antsika mba hahatratrarantsika ny tanjona napetrany ho antsika.
Betsaka ny andalan-tsoratra ao amin'ny Baiboly momba ny fiainana vaovao ao amin'i Kristy, fa kosa mifantoka amin'ny tian'i Jesosy ambara ao amin'ny Beatitudes isika. Andao hojerentsika ny fomba ifandraisan'Andriamanitra amintsika sy ny fomba hanovany antsika bebe kokoa ho olom-baovao.
Ny mahantra ara-panahy
Ara-panahy ny fahantrantsika ary mila ny fanampiany maika isika. « Sambatra ny malahelo am-panahy; fa azy ny fanjakan’ny lanitra » (Mat 5,3). Eto i Jesoa dia manomboka mampiseho amintsika fa tena ilaintsika Andriamanitra. Amin’ny alalan’ny fitiavany ihany no ahafahantsika mahafantatra izany filana izany. Inona no dikan’ny hoe “mahantra fanahy”? Karazana fanetren-tena izay mahatonga ny olona hahatsapa ny fahantrany eo anatrehan’Andriamanitra. Hitany fa tsy ho vitany ny mibebaka amin’ny fahotany, ny manilika izany ary mifehy ny fihetseham-pony. Ny olona toy izany dia mahafantatra fa avy amin’Andriamanitra ny zavatra rehetra ary hanetry tena eo anatrehan’Andriamanitra izy. Te hanaiky ny fiainana vaovao omen’Andriamanitra azy amim-pifaliana sy fankasitrahana izy. Koa satria mirona hanota amin’ny maha olona ara-nofo sy ara-nofo isika, dia ho tafintohina matetika kokoa, fa Andriamanitra kosa hanitsy antsika mandrakariva. Matetika isika no tsy mahatsapa fa mahantra ara-panahy isika.
Ny mifanohitra amin'ny fahantrana ara-panahy dia ny hoe miavonavona am-panahy. Hitantsika izany toe-tsaina fototra izany ao amin’ny vavaky ny Fariseo manao hoe: “Misaotra Anao aho, Andriamanitra ô, fa tsy mba tahaka ny olon-kafa aho, dia ny jiolahy, ny tsy marina, ny mpijangajanga, na ny tahaka io mpamory hetra io aza.” ( Lioka 1 .8,11). Nasehon’i Jesosy antsika avy eo ny ohatry ny lehilahy mahantra fanahy, tamin’ny fampiasana ny vavaky ny mpamory hetra manao hoe: “Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota!”
Ny malahelo am-panahy dia mahalala fa tsy afa-manoatra izy ireo. Fantatr'izy ireo fa nindramina fotsiny ny fahamarinany ary miankina amin'Andriamanitra. Ny hoe mahantra ara-panahy no dingana voalohany mamolavola antsika amin'ny fiainana vaovao ao amin'i Jesosy, amin'ny fanovana ho olom-baovao.
I Jesoa Kristy dia ohatry ny fianteherana amin’ny Ray. Hoy i Jesosy momba ny tenany: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Ny Zanaka tsy mahazo manao na inona na inona ho Azy, afa-tsy izay hitany ataon’ny Ray; fa izay ataon’ireto farany no ataon’ny Zanaka tahaka izany koa » (Jao 5,19). Izany no sain’i Kristy tian’Andriamanitra hamboarina ao anatintsika.
Ekeo ny fijaliana
Ny olona torotoro fo dia zara raha miavonavona, misokatra amin’izay tian’Andriamanitra hatao amin’ny alalany. Inona no ilain'ny olona kivy? « Sambatra izay mijaly; fa hahazo fampiononana izy » (Matio 5,4). Mila fampiononana izy ary ny Mpananatra dia ny Fanahy Masina. Ny fo torotoro no fanalahidin’ny Fanahin’Andriamanitra miasa ao anatintsika. Fantatr’i Jesosy ny zavatra resahiny: Izy dia lehilahy nahafantatra ny alahelo sy ny fijaliana mihoatra noho isika rehetra. Ny fiainany sy ny sainy dia mampiseho amintsika fa ny fo torotoro eo ambany fitarihan’Andriamanitra dia afaka mitondra antsika ho amin’ny fahalavorariana. Indrisy anefa fa rehefa mijaly isika ka miseho lavitra an’Andriamanitra, dia matetika isika no manao zavatra mangidy sy miampanga an’Andriamanitra. Tsy izany no sain’i Kristy. Ny fikasan’Andriamanitra amin’ny fiainana sarotra dia mampiseho amintsika fa manana fitahiana ara-panahy voatahiry ho antsika Izy.
Ny malemy fanahy
Manana drafitra ho antsika tsirairay Andriamanitra. « Sambatra ny malemy fanahy; fa izy no ho tompon’ny tany » (Mat 5,5). Ny tanjona amin’izany fitahiana izany dia ny fahavononana hanolo-tena an-tsitrapo ho an’Andriamanitra. Rehefa mitolo-batana aminy isika, dia omeny hery hanaovana izany. Rehefa manaiky isika dia mianatra fa mila ny hafa isika. Ny fanetren-tena dia manampy antsika hamantatra izay ilain'ny tsirairay. Mahita fanambarana mahafinaritra isika izay manasa antsika hanolotra ny enta-mavesatsika aminy: “Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho » (Mat 11,29). Andriamanitra re, mpanjaka re! Endrey ny halavitry ny fahatanterahany! Ny fanetren-tena sy ny fahalemem-panahy ary ny fahamaotinana dia toetra tian’Andriamanitra hamboarina ao anatintsika.
Andeha hotadidintsika fohifohy ny fomba nanalam-baraka an'i Jesosy ampahibemaso rehefa nitsidika an'i Simona Farisianina izy. Tsy noraisina izy, ny tongony tsy voasasa. Nanao ahoana ny fihetsiny? Tsy tafintohina izy, tsy nanamarin-tena fa niaritra izany. Ary rehefa nanondro an'io tamin'i Simona izy taty aoriana dia nanao izany tamim-panetren-tena (Lio. 7: 44-47). Nahoana no zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fanetren-tena, nahoana izy no tia ny manetry tena? Satria taratry ny sain'i Kristy izany. Tianay ihany koa ny olona manana an'io kalitao io.
Mangetaheta ny fahamarinana
Ny maha-olombelona antsika dia mitady ny rariny ho azy manokana. Rehefa tsapantsika fa mila rariny tokoa isika, dia omen’Andriamanitra antsika ny rariny amin’ny alalan’i Jesosy: «Sambatra izay noana sy mangetaheta fahamarinana; fa izy no ho voky » (Mat 5,6). Omen’Andriamanitra antsika ny fahamarinan’i Jesosy satria tsy afaka mijoro eo anatrehany isika. Ny filazana hoe “noana sy hetaheta” dia manondro ny filana mafy sy mahatsiaro tena ao anatintsika. Ny faniriana dia fihetseham-po mahery. Tian’Andriamanitra hampifanaraka ny fontsika sy ny faniriantsika amin’ny sitrapony isika. Andriamanitra dia tia ny mahantra, ny mpitondratena sy ny kamboty, ny mpifatotra sy ny vahiny amin'ny tany. Ny filantsika no fanalahidin’ny fon’Andriamanitra, te-hikarakara izay ilaintsika Izy. Fitahiana ho antsika ny mahafantatra izany filana izany ary mamela an’i Jesosy hampitony izany.
Ao amin'ny hasambarana efatra voalohany, i Jesosy dia mampiseho hoe tena mila an'Andriamanitra isika. Amin'izao vanim-potoanan'ny fanovàna "pupation" izao dia fantatsika ny filantsika sy ny fahatokisantsika an'Andriamanitra. Mihalehibe ity fizotran-javatra ity ary amin'ny farany dia hahatsapa faniriana lalindalina kokoa isika hanakaiky an'i Jesosy. Ny hasambarana efatra manaraka dia mampiseho ny asan'i Jesosy ao anatintsika.
Ilay mamindra fo
Rehefa mamindra fo isika, dia mahita zavatra momba ny sain’i Kristy ao anatintsika ny olona. « Sambatra ny miantra; fa hamindra fo izy » (Mat 5,7). Amin’ny alalan’i Jesosy no ianarantsika ny hamindra fo satria fantatsika ny filan’ny olona iray. Mampitombo ny fangorahana sy ny fiaraha-miory ary ny fiahiana ny olon-tiantsika isika. Mianatra mamela heloka izay manisy ratsy antsika isika. Ampitaina amin’ny mpiara-belona amintsika ny fitiavan’i Kristy.
Manàna fo madio
Ny fo madio dia mifantoka amin’i Kristy. «Sambatra ny madio am-po; fa hahita an’Andriamanitra izy” (Mat 5,8). Ny fanoloran-tenantsika ho an’ny fianakaviantsika sy ny namantsika dia tarihin’Andriamanitra sy ny fitiavantsika azy. Raha ny fontsika no mitodika bebe kokoa amin’ny zavatry ny tany noho ny amin’Andriamanitra, dia izany no mampisaraka antsika aminy. Nanolotra ny tenany manontolo ho an’ny Ray i Jesosy. Izany no tokony hiezahantsika sy hanolorantsika ny tenantsika tanteraka ho an’i Jesosy.
Fampihavanana sy firaisana aminy ary ao amin’ny tenan’i Kristy no irin’Andriamanitra. « Sambatra ny mpampihavana; fa izy no hatao hoe zanak’Andriamanitra » (Mat 5,9). Matetika dia misy ny tsy fitovian-kevitra eo amin’ny fiaraha-monina kristiana, ny tahotra ny hifaninana, ny tahotra sao hifindra monina ny ondry, ary ny fanahiana ara-bola. Tian’Andriamanitra hanao tetezana isika, indrindra fa ao amin’ny tenan’i Kristy: « Aoka ho iray ihany izy rehetra, tahaka Anao Ray ato amiko, ary Izaho koa ao aminao, dia ho ao amintsika koa izy, mba hinoan’izao tontolo izao. fa ianao no naniraka ahy. Ary nomeko azy ny voninahitra nomenao Ahy, mba ho iray izy, tahaka ny maha-iray Antsika, ary Izaho ao aminy, ary Hianao ato amiko, mba ho iray tanteraka izy, ary ho fantatr'izao tontolo izao fa Hianao no naniraka Ahy. Tiavo izy ireo tahaka ny nitiavanao Ahy” (Jaona 17,21-23).
Izay no arahina
Naminany tamin’ny mpanara-dia azy i Jesosy hoe: “Ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony. Raha nanenjika Ahy izy, dia hanenjika anareo koa; raha nitandrina ny teniko izy, dia hitandrina ny anareo koa” (Jao 15,20). Hitondra antsika tahaka ny nitondrany an’i Jesosy ny olona.
Voalaza eto ny fitahiana fanampiny ho an’ireo enjehina noho ny fanaovana ny sitrapon’Andriamanitra. « Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana; fa azy ny fanjakan’ny lanitra » (Mat 5,10).
Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy dia efa miaina ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra isika, ao amin’ny fanjakan’ny lanitra, satria ao aminy no ananantsika ny maha-izy antsika. Ny Hasambarana rehetra dia mitarika ho amin'izany tanjona izany. Tamin’ny faran’ny Hasambarana, dia nampionona ny olona i Jesoa ary nanome fanantenana azy ireo: «Mifalia sy mifalia; hahazo valisoa be dia be ianao any an-danitra. Fa toy izany koa no nanenjehany ny mpaminany izay talohanareo » (Mat 5,12).
Amin'ireo hasambarana efatra farany, isika no mpana, miasa ivelany isika. Tian'Andriamanitra ny mpanome. Izy no mpanome ny lehibe indrindra amin'izy rehetra. Izy no manohy manome izay ilaintsika, ara-panahy sy ara-nofo. Ny saintsika dia ampitaina amin'ny hafa eto. Tokony ho taratry ny toetran'i Kristy isika.
Manomboka ny fatorana ny vatan'i Kristy rehefa fantatry ny mpikambana ao aminy fa tokony hifanohana izy ireo. Ireo noana sy mangetaheta dia mila sakafo ara-panahy. Amin'ity vanim-potoana ity dia mikasa ny hamantatra ny faniriany azy sy ny mpiara-belona amintsika Andriamanitra amin'ny alàlantsika miaina.
Alohan’ny ahafahantsika mitarika ny hafa ho amin’Andriamanitra, dia miara-miasa amintsika i Jesosy mba hanorina fifandraisana akaiky aminy. Amin’ny alalantsika no anehoan’Andriamanitra amin’ny olona manodidina antsika ny famindrampony sy ny fahadiovany ary ny fiadanany. Ao amin’ireo Hasambarana efatra voalohany dia miasa ao anatintsika Andriamanitra. Ao amin’ireo Hasambarana efatra manaraka, dia miasa ivelany amin’ny alalantsika Andriamanitra. Ny ao anatiny dia mifanaraka amin'ny ivelany. Amin’izany fomba izany, tsikelikely, no mandrafitra ilay olom-baovao ao anatintsika. Nomen’Andriamanitra fiainam-baovao isika tamin’ny alalan’i Jesosy. Anjarantsika ny mamela izany fiovana ara-panahy izany hitranga amintsika. Jesosy no manao izany. Nampitandrina antsika toy izao i Petera: “Raha ho levona izany rehetra izany, ahoana no ijanonanareo amin’ny fandehanana masina sy ny toe-panahy araka an’Andriamanitra?” (2. Petrus 3,11).
Ao anatin'ny dingana fifaliana isika izao, tsiro kely amin'ny hafaliana mbola ho avy. Raha manidina mankany amin’ny masoandro ny lolo, dia hihaona amin’i Jesosy Kristy isika amin’izay: “Fa Izy, dia ny Tompo, no hidina avy any an-danitra, rehefa miantso, rehefa mitsoka ny feon’ny arikanjely sy ny trompetran’Andriamanitra ary ny maty. lasa voalohany izay maty tao amin’i Kristy dia nitsangana tamin’ny maty. Ary rehefa afaka izany, isika izay velona sy izay sisa dia hakarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona ho any amin'ny habakabaka hitsena ny Tompo. Dia ho any amin’ny Tompo mandrakariva isika » (1. Tes 4,16- iray).
nataon'i Christine Joosten